सरकार सञ्चालनमा एकलकाटे प्रवृत्तिका कारण पार्टीमा समस्या : युवा नेता डा.भट्ट - Rajmarga
सरकार सञ्चालनमा एकलकाटे प्रवृत्तिका कारण पार्टीमा समस्या : युवा नेता डा.भट्ट
डा. दिपक प्रकाश भट्ट कञ्चनपुर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद हुन् । नेपाली कांग्रेसका चर्चित नेता रमेश लेखकलाई पराजित गरेका भट्ट भारतको जेएनयू विश्व विद्यालयबाट विद्यावारीधि गरेका हुन् । नेकपाका उदाउदा युवा नेता भट्टसँग राजमार्गका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ
नेकपामा विवाद कसरी सृजना भयो ?
जुन आधार र मुल्य मान्यतामा हामीले पार्टी एकता गरेका थियौं । हामीले त्यो ढंगले पार्टीलाई सञ्चालन गर्न सकेनौं । पार्टीले समाजवादको लक्ष्य सरी पुरा गर्छ, स्पष्ट आधार तयार गर्न सकेनौं भएको २१ औं शताब्दीको जनवाद र जबज पनि छोड्यौं । जनताको जनवाद भन्यौ भनेर शब्दमा मात्र भयो । हामी यही चुक्यौं । दुई अध्यक्षको परिपार्टी निर्माण गरेर आलोपालेको व्यवस्थासहति सहमति गरेर आयौं त्यो पालन हुन सकेन । पार्टी विधि पद्धति प्रकृयाबाट चल्न छोडेर खास गरिकन त्यसको नेतृत्व गरि रहेको प्रधानमन्त्रीको टिमले पार्टीलाई त्यसरी संचालन गर्न खोजेको र पार्टीको विधि प्रकृयालाई पालना नगरेको कारण समस्या भयो । जनताको दुःख पिडा एकातिर छन्, सरकार संचालनमा एकलकाटे शैली गर्ने । समाजवादी यात्राको बाटो तय गर्न सरकार जान सकेन ।
पार्टी विवादको मुख्या कारण सरकार सञ्चालको शैली भन्न खोज्नु भएको हो ?
मुख्य कुरा नै त्यही हो ।
सरकार जनमुखी हिसाबले चल्न सकेन । पार्टीले लिएको समाजवादको यात्रालाई सरकारले पछ्याउन सकेन । पार्टीभित्र रहेका संगठनहरुलाई पुर्णता दिन सकेन । विभागहरु गठन गर्न सकिएन । नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएर अगाडी बढाउन सकिएन । पार्टी कमिटिहरुले गाउँ लेबलसम्म काम गर्न सकेको छैन । सरकार पार्टी एक भएर लाग्नुपर्ने हो । तर यहाँ सरकार पार्टीसँग कुनै छलफल नगरीकन चलेको छ । पार्टीको एउटा अध्यक्षको नेतृत्वमा अहिले सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । तर पार्टी रहेका अरु नेताहरुलाई कसरी सरकार चलेको छ, थाहा छैन । एकलौटी पारामा सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारले गरेको कामहरु पनि एक पछि अर्को गर्दै विवादमा आएको छ ।
सरकार बहुमतको छ, पार्टी सबैभन्दा ठुलो छ । यो बेला राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्नुपर्ने । कालापानी, लिपुलेक फिर्ता गर्न हामीले अभियानमा चलाउनु पर्ने तर प्रधानमन्त्री आफ्नै निवासमा भएको कार्यक्रममा नआउने बाहिर मलाई हटाउन खोजियो । पार्टीभित्रकै साथीहरु लागे भन्छन् । यसरी विधिभन्दा बाहिर गएर बोल्ने, सरकार सञ्चालन गर्ने असिन केही आलाकाँचा कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्ने यस्तो अवस्थाले समस्या ल्यायो । सरकारले पार्टीेको एजेण्डा स्थापित गर्न सकेको छैन । पार्टी कमिटिलाई सरकारले गरेको कामको प्रचार गर्न लगाइएको छैन ।
नेकपाका शिर्ष नेताहरु पार्टी संचालनमा चुकेकै हुन् ?
होइन । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा चुक्दै गएको देखिन्छ । त्यसको लागि व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिँदै गएको भए हुन्थो । तर यहाँ त इन्डिभिज्युल भयो । पार्टीको विधानमा पनि कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा दुई अध्यक्ष तथा केन्द्रिय कमिटिले पास गराए र गर्ने भानेको छ । त्यसलाई मानेर गएको अवस्था छैन । पुरानै शैली र पद्धतिले सरकार सञ्चालन गरिएको छ । पार्टीलाई पनि त्यसरी नै सञ्चालन गरिएको छ । पहिलोपंक्ति कमजोर हुँदै गयो । अब दास्रो पंक्तिले त्यो नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्न तयार हुनु पर्दछ । तर त्यो आजको भोली नै सम्भव छैन ।
पार्टीलाई एक बनाए अगाडि बढाउन, गतिशिलता दिन युवा नेताहरुको सकृय भुमिका देखिँदैन नि ?
हामीले त्योभित्र छलफल बहस गरिरहेका छौं । पार्टीभित्रको विषय हामीले पार्टीभित्र बसेर मिलाउनु पर्छ भनेर पनि हामी भित्री रुपमा मात्र लागेका छौं । अहिले समय पनि त्यस्तै छ । बर्षामास छ । तर पनि आन्तरिक रुपमा पार्टीभित्र छलफल भएको छ । पार्टीलाई विधि विधान भित्र सञ्चालन गर्न लागि हामीले दबाब दिइरहेका छौं । महाधिवेशन गर्ने, केन्द्रिय कमिटि बनाउने लगायतको बिषयमा छलफल केन्द्रित हुँदै गएको छ ।
पार्टीलाई फुटबाट बचाउने शुत्र के हुन सक्छ ?
पार्टीभित्र छलफल बहस गर्ने । पार्टीको विधि, विधान प्रकृयालाई पूर्ण रुपमा पालना गर्ने । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शार्मा ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा दिएको अभिव्यक्तिको कारण उहाँको राजिनामा माग गरिएको हो । उहाँले त्यही कुरा पार्टीको कमिटिभित्र गर्नु सक्नु हुन्थ्यो । तर बाहिर बोल्नु भो । कमिटिभित्र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षलाई छलफल गर्न रुचि छैन । पार्टीले गरेको निर्णयलाई मान्ने, पार्टीको विधि, विधान र प्रकृया मान्ने मानेर जाने भयो भने सबै किसिमको समस्याको समाधान हुन्छ ।
PreviousPrevious post:बेलौरी नगरपालिकाको कोरोना खर्च २ करोड, कर्मचारी भत्ता २५ लाख
Next post:~ मैले जेजे भन्छु, त्यै त्यै प्रजातन्त्र ! ~
उपनिर्वाचन मंसिर १४ गते गराउन सिफारिस